I-pied-a-terre yethu. Hamba noma kuphi! - I-Airbnb
I-pied-a-terre yethu. Hamba noma kuphi!
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Paul Anthony
Osilingi abaphezulu, ilanga, bazizwa bevulekile, njenge-Paris. Kuhlanganisa indawo yokupaka yangaphakathi. Ukuvimbela okuyi-1 kuya ku- EDLULE, izivalo ezingu-3 eziya e-U of T, izibhedlela ze-TIFF Lightbox, e-Kensington, e-Chinatown, e-Queen West, e-Eaton Centre, konke kukulungele. Isiteshi sesitimela esiseduze, i-TTC izinyathelo nje kuphela. Ama-bistros, amathilomu.
Isakhiwo esihle nekamelo lokulala elithulile elinomnyango, kusho ukuthi abantu abashadile, mhlawumbe abantu abashadile nengane bangabelana ngokunethezeka ngendawo, babhale noma bafunde, balalele umculo. Umbhede omkhulu ekamelweni lokulala unomatilasi omuhle. Umatilasi ovamile olala abantu ababili kusofa ogoqwayo akukubi kodwa cishe kunethezekile kumuntu omdala oyedwa.
I-condo izwakala inkulu kuno-600 sq ft.
Ama-closet amaningi. Isihlalo sabakhubazekile singasuka endaweni yokungena engemuva negalaji. Ukushayela indilinga eyingxenye phambi kwesakhiwo. Indawo iphakathi nendawo kodwa ayinamsindo. Amathilomu amahle ase-Baldwin Street nama-bistros aqhelelene.
Lesi sakhiwo ekuqaleni sasiyisigodlo ngo-1880. Ilungiswe ngeminyaka yoo-1980 .Baphethe imininingwane yase-Victorian kodwa bashiya ama-cielings aphakeme namafasitela amade. Inxusa lase-Italy, kanye nendlu yase-George Brown kusemgwaqweni ofanayo. Isikole samantombazane siseduze. Kukhona abafundi abaningi nabantu abasebasha endaweni kanye nezindawo zokudlela eziningi ezinhle kodwa ezingabizi kakhulu. Indawo izwakala iphephile ebusuku. Sibuyela emuva ku-Beverley sisuka e-Queen Street West, King, noma e-U of T ngo-11pm. Imakethe yase-Kensington ingamabhuloho angu-4 noma angu-5. Ilungele isinkwa sobuciko, ushizi, imifino, ikhofi lasekuseni kanye nokwenzeka emgwaqweni ngeSonto.
Ibungazwe ngu-Paul Anthony
Siphila ezweni futhi i-condo iyindlu yethu "yindlwana". Sizohlangana nawe lapho ufika futhi njengoba uhamba. Ngaphandle kwalokho singakwazi ukuthumela umqhafazo . Ikuvumela ukuthi ukhulume ngamashidi namathawula. Ngincamela ukuzigeza futhi ngizifake ngokwami (ngike ngawalimaza amashidi endaweni yokuqasha yase-France) noma ungasebenzisa awakho.
Siphila ezweni futhi i-condo iyindlu yethu "yindlwana". Sizohlangana nawe lapho ufika futhi njengoba uhamba. Ngaphandle kwalokho singakwazi ukuthumela umqhafazo . Ikuvumela ukuthi…